Rubén Álvarez dia namorona ny Adobe Photoshop Splash Screen | Famoronana an-tserasera
Raha manana famandrihana amin'ny Creative Cloud ianao dia azo antoka fa, raha nijery ireo trosa niaraka tamin'ny fidirana tao amin'ny fanontana vaovao an'ny Adobe Photoshop ianao dia ho gaga ianao amin'ny fisehoan'i Rubén Álvarez amin'ny ilay mpanakanto namorona ny écran splash o efijery Splash.
Fanamarihana tena tsara ho an'ity artista ity izay nifandray taminay ny zoma lasa teo mba hanambara ity vaovao tena mahafinaritra ity ary namboarinay hampahafantatra anao anio avy amin'ireto andalana ireto ao amin'ny Creativos Online izay tianay haseho sy hampiroborobo ny asan'ny mpanakanto efa niorina toy ireo izay manao ny dingana voalohany amin'ny tontolon'ny sarotra famoronana, famoronana ary zavakanto. Ka andao hofantarina kely momba an'i Rubén Álvarez sy ny fahaizany mamorona tsara.
Ny fananana ny haja amin'ny fisehoan'ny asanao isaky ny manomboka programa toa ny Photoshop dia zavatra tsy sendra olon-kafa fotsiny ary i Rubén Álvarez no afaka mirehareha.
Ny asany 'Paradisa amin'ny ho avy' dia tompon'andraikitra amin'ny fanokafana ny làlana ho antsika amin'ny iray amin'ireo fandaharana izay nanova indrindra ny endrika sy ny seho kanto tato anatin'ny taona vitsivitsy sy am-polony. Noho io antony io dia eo alohan'ny asa lehibe iray isika izay manokatra ny masony ny zava-baovao amin'ny taona Photoshop vaovao miaraka amin'ny fanamafisana ny zavakanto nomerika izay reharehan'ny Rubén Álvarez ary ny mason'io maso io no nalaina avy tao amin'ny sangan'asan-kanto izay misy ilay hazo In shade of ny mavokely dia aseho azy ho toy ny iris, ary ny lanitra filentehan'ny masoandro dia mamorona endrika maso lehibe izay manatrika ny faravodilanitra.
Izay faravodilanitra izay miandry ho avy mahafinaritra ianao ho an'ity mpanakanto sary an-tsaina ity izay nianatra manokana momba ny famerenana sary, fanodinkodinana sary ary sary hosodoko matte niomerika, vao 23 taona monja. Ny fanandramana amin'ny famoronana seho fotorealista, ny ivon-toerany sy ny fifantohany dia mitodika any amin'ny natiora sy ny fifanakalozana tantara amin'ny alàlan'ny sary, zavatra iray izay hita vetivety amin'ity asa ity antsoina hoe 'Paradisa amin'ny ho avy' izay saika tantaraina tantara mahafinaritra antsika, raha misy manomboka mamelabelatra hevitra momba ilay dingana mahafinaritra an'ny protagonista azy.
Avy eto miarahaba an'i Rubén Álvarez ho an'io Splash Screen ao amin'ny Adobe Photoshop io ary ho an'ny kanto ho avy kanto izay hanandramana aseho araka izay tratra.
Anananao ny azy tranonkala avy eto, ny Behance anao y ny facebook-nao avy amin'ny ity rohy hafa ity.
Mpanakanto iray mifandraika amin'ny fanodinkodinana sary ary iza no tsy azonao hadino ny fotoana nifanarahana: Erik johannson.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rubén Álvarez, mpanakanto espaniola izay namorona ny Adobe Photoshop CC Splash Screen 2015